नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७९ पुग्यो, देशभर थपिए ३३८ संक्रमित – E-Ramechhap
नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७९ पुग्यो, देशभर थपिए ३३८ संक्रमित
प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७७, सोमबार १८:३७
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) बाट थप चार जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा काठमाडौंका दुइ तथा बाँके र पर्सामा एक–एक जना रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका—१० मध्यबानेश्वर बस्ने ७६ वर्षका पुरुषको मेडिकेयर अस्पतालमा र काठमाडौंको किर्तिपुर ट्याङ्लाफाट बस्ने ६४ वर्षका पुरुषको आज मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका दुइका ७० वर्षका महिलाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहपुरमा उपचारका क्रममा हिजो मृत्यु भएको छ । २३ गते अस्पताल भर्ना भएका महिला उच्च रक्तचापको विरामी रहेको पाईएको छ । यस्तै पर्साको देवयानी—१५ का ४५ वर्षका महिलाको साउन २५ गते नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो । योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७९ पुगेको छ ।
उपत्यकामा ४४ सहित देशभर तीन सय ३८ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण
पछिल्लो २४ घण्टामा उपत्यकामा ४४ जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन् । जसमा काठमाडौंमा ३६ तथा ललितपुर र भक्तपुरमा चार–चारजना रहेका छन् । यसअघि हिजो उपत्यकामा ९२ जना सङ्क्रमित थपिएका थिए । आजको नियमित जानकारीका क्रममा स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयले काठमाडौंमा ४४ सहित देशभर तीन सय ३८ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएको जनाएको हो । योसँगै देशभर कोरोना सङ्क्रमितको कुल संख्या २३ हजार तीन सय १० पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा एक सय ४० जना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् भने हालसम्म निको हुनेको कुल संख्या १६ हजार चार सय ९३ जना पुगेको छ । योसँगै अब सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या ६ हजार सात सय ३८ रहेको छ भने आज आठ हजार चार सय ३२ जनाको परीक्षण भएको छ ।